China Stainless Simbi Rutsoka chinja Tattoo chitiviri kugadzira uye fekitori | MOLONG
Stainless Simbi Tsoka Chinja Tattoo Pedal
Isu tiri kuona okisheni yeiyo 360Â ° Star Dhizaini Tattoo tsoka chitiviriine 5'ft tambo uye yakajairwa 1/4 ″ foni-plug. Inosanganisira non-skid anti-marring base. Izvo zviri nyore kuwana dhizaini zvinopa yakanakisa kudzora muchina. Tine sarudzo dzakasarudzika dzemakiti uye zvishongedzo zvekusarudza kubva.
Mamiriro: Brand Nyowani
360Â ° Nyeredzi Yakagadzirwa Tattoo tsoka chitiviri
Yakajairwa 1/4 ″ isina simbi-foni-plug.
Asiri-skid anti-marring base.
Chimiro: 3 "" x 3 "" x 1
Unogona kuyedza yedu yekutanga kirasi masevhisi nekutanga kutenga mune zvidiki zvishoma. Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinogona kutengwa mune imwechete unit semasampuli uye zvakare nemitengo yepamusoro.
Isu tinonunura zvigadzirwa kubva kuChina neDHL, FEDEX, EMS, TNT nezvimwewo kunzvimbo huru senge US, Europe neAustralia, zvinotora chete mazuva 3-5.
Isu tinoshandira vatengi vanobva pamusoro penyika makumi mashanu, uye isu tichiri kukura. Asi chiono chedu hachichinje: Nyika imwe, mutengo mumwe.
Tsvaga chete zvakanakisa zvigadzirwa zvevatengi uye uve nechokwadi chemhando yepamusoro inogoneka.
Rongedza nzira yekutenga neyekubhadhara kuti zviite sezviri nyore sezvinobvira.
Batsira iwe kuti uwane zvigadzirwa uye vagadziri muChina.
Endesa zvinhu kune vatengi vedu pasirese nekumhanyisa uye nemazvo.
Ipa maawa makumi maviri nemasere ekutsigirwa nevatengi mukati mevhiki.
Nguva yekutumira inoenderana nenyika yako chinhambwe
*** KuEurope, Australia neNorth America, anenge mazuva 4-6 ekushanda iwe unogona kuiwana kumba kwako!
*** KuAsia, chete 3-4 mazuva ekushanda iwe unogona kuiwana kumba kwako.
*** Ku Africa neSouth America, angangoita mazuva masere ekushanda iwe unogona kuiwana.
Nguva yekuendesa haina kusanganisa yekugadzirisa nguva.
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kunze zuva rega rega, kubva Muvhuro kusvika Mugovera, kunze kwemazororo. Mazhinji maodha akaiswa mukati mevhiki anozotumirwa muzuva rimwe chetero, nepo maodha akaiswa pakupera kwevhiki anozotumirwa Muvhuro unotevera. Iwe uchagamuchira e-mail simbiso nenhamba yako yekutevera. Maawa makumi maviri nemana mushure mekugashira yako nhamba yekutevera, iwe unozogona kuteedzera odha yako online
Pashure: RCA Silicone Rubber Tattoo Simba Tambo
Zvadaro: Nhema silicone yakatetepa tambo inoraswa tattoo grip nemazano akajeka
Tattoo tsoka chitiviri
2 muna 1 High Quality Dual inowanikwa Tattoo DC Co ...
Yakarukwa Tattoo Clip Tambo & RCA tambo
Stainless simbi Tattoo anofamba
Hot kutengesa waya kuti coils muchina Cheap springl ...